SHIRKA GUDAHA MUQDISHA REAR MUUQAAL MIRROR PK9512 AUTO Dibadda MIRROR Albaabka MIRROR EE TOYOTA HIACE. U fiirso xaaladaha wadada dhinacyo badan una kaxee si nabadgelyo leh. Si loo gaaro hadafkan, waxaan dhidibada u dhignay xakameyn tayo leh oo adag, kormeerid, maamulka ugu fiican iyo nidaamka saadka wanaagsan.
Muraayadayada dib u rogida waa mid ka mid ah qeybaha amniga muhiimka u ah jirka gawaarida. Tayada sare ee PK9810 waa muraayad gaari xamuul ah oo loogu talagalay Hino & Isuzu FTR.SWB waxay leedahay qalab qeybinta qeybaha dayactirka iyo iibsiga, iibka, keydinta iyo keydinta qalabka. qaybaha wax soo saarka, oo ay ku jiraan dhammaan qaybaha gawaarida Shiinaha.
Muraayada Gawaarida Gawaarida yurubiyanka ah PK9440 waxay ku haboontahay Mercedes-Benz Actros MP4.Competitive price.Our warshaddeena waxay diirada saareysaa baaburka gawaarida xamuulka ee baarista iyo hormarinta, wuxuu maray nidaamka maaraynta tayada ISO9001 iyo wixii la mid ah. Waqtigan xaadirka ah, waxaan sidoo kale u gudubnay Emark iyo DOT si guul leh.
Tayada sare ee PK9822 waa muraayad gaari xamuul ah oo loogu talagalay taxanaha cusub ee Hino & Volvo F110.Waxaan kadhignaa dhamaan badeecadaha kuwa fiican oo waara macaamiisheena. Waxaan leenahay shahaadooyinka CE iyo ISO9001: 2008 si loo hubiyo tayada wax soo saarkeena.
Muraayaddeenna rogidda waa mid ka mid ah qeybaha amniga ee jirka gaariga. PK9438 wuxuu ku habboon yahay jilayaasha Mercedes Benz MP3 taxane ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo xaalada wadada gaariga gadaashiisa iyo darawalku inuu ilaaliyo jirka oo dhan gaariga inta lagu gudajiro howsha wadista. Muraayadahayada muraayadaha indhaha waa qalab cusub.